wow!!! ချစ်စရာလေး။ မီနီမောက်စ်လေးပါ ဆွဲရင် ကောင်းမှာပဲ။ အမလေးကို ပိုချစ်လို့။ :D
လုပ်ရင် ရရဲ့ သားနဲ့ .........ဒီအတိုင်းနေနေတာကိုး..။
ရေးဆွဲသူကိုရော ၊ကြည့်သူကိုပါ ပျော်ရွှင်ရယ်မောစေတယ်....။
အင်း...ပန်ဒိုရီ က ခန့် ချောကြီးပဲ
သားရဲ့ Heroလေ… Printထုတ်ပေးပြီး ပြောလိုက်မယ် တီတီပန်ပန်က သားအတွက်ဆွဲပေးတာလို့ …
ကျွန်တော့် ပုံတူ ဆွဲပေး ပါလား? ဟီးဟီး
အော်။ လက်ရာကောင်းပဲ။ တစ်ကယ်ပဲ။
နာ့ပုံတူ နင်ဆွဲပေးတာလဲ တူတယ်တော့.. ဟိဟိ
လက်မနဲ့ ထောက်ဆွဲလို့ရ မရသိချင်ပါတယ်
Mickey ပြီးတော့ Minnie လေး ဆွဲပေးအုံးလေ...
ဒါမှ သူလဲ အဖေါ်ရသွားမှာပေါ့...။
အားပေးကြတာကျေးဇူးပါ အချိန်ရရင် မီနီလေးရော မစ်ကီပါ ဆက်ဆွဲဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါမယ်